कुरो यात्रा आरम्भको । | बाबाजी बिचार………‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍…………………………………….
कुरो यात्रा आरम्भको ।
Posted on अगस्ट 28, 2012	by baabajee
समय चर्चा परिचर्चाको छ । बाटोघाटोमा हिँड्दा ठोक्किन आइपुग्नेहरुले भनेको सुन्चु-“जमाना स‌ंचारको जो हो । जस्ले यसलाइ उपयोग गरेर आफ्ना कुरा सबैमाझ पुर्याउँछ उ नै चर्चित बन्छ । त्यसैले अरुले सोधिखोजी गरुन या नगरुन आफैले भएपनि आफ्नो बखान गर्नै पर्छ ।”
यो कुरो सुन्दा आफ्नो पनि सित्ति मन पोलेको हैन र ? कहाँबाट आफ्ना कुरा सबैमाझ पुर्याउनी होला भनेर । कम्ताका छन र यो मनमा हुटहुटी ?
त्यसको मतलब यो ठाम् बाहेक अन्त आफ्ना कुरा पोख्नी भाँडै नबनाको पनि हैन….तर त्यस्को सुरु नै भिन्दै तरिका’ट भएपछि क्यार्नु? त्यही भएर यसाँ आइया छ । अब देखेका कुरा, भोगेका कुरा, भन्न मनलाएका कुरा सबै भटाभट यहिँ दन्काइन्च । जे पर्ला पर्ला ।
आजैबाट बाल कार्जेकरमको नयेँ अध्ये सुरु !